Weligaa weerar ama dagaal ma lagu qaaday? Waxaad la hadli kartaa dhakhtarkaaga guud (GP) - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Weligaa weerar ama dagaal ma lagu qaaday? Waxaad la hadli kartaa dhakhtarkaaga guud (GP)
Ma kala kullantaa dhibaatooyin lamaane dagaal badan, ma laguu gaystay weerar ama ma kula kullantaa dagaal xaga guriga? Ma waxa aad la dhibtoonaysaa waaya aragnimo dhacday muddo ka hor? Ama ma waxaad ka baqanaysaa in guur lagugu khasbo? Waxaad la hadli kartaa dhakhtarkaaga gaarka ah.
Dhakhtarada waxaa hawshoodu tahay caawinta bukaanka qaba jirrooyinka jidhka ama kuwa muuqda, caafimaadka maskaxda iyo isticmaalka khamaradda/maandooriyaha. Taas macnaheedu waxa weeye dhakhtarkaaga gaarka waxa uu ka masuulyahay caafimaadkaaga marka lagu baadho, lagu daweeyo oo lagula soconayo. Dhakhtarku inta badan waxa uu ka haysan doonaa argti guud oo wanaagsan caafimaadka qofka iyo xaalada nolosha; Dhakhtarku waxa uu sidoo kale noqon karaa ku lamaanaha wada sheegaysiga wanaagsan oo waxa uu waayo aragnimo u leeyahay la kullanka dadka dhibta qaba.
Dhakhtarku waxa uu noqon karaa ku lamaanaha wada sheekaysiga wanaagsan oo waxa uu waayo aragnimo u leeyahay dadka dhibta qaba
Dhaktarkaagu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaadaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Dhakhtarkaagu waxa uu bixin karaa turjubaan, marka ay lama huraanka tahay.
Dhakhtarkaaga gaarka ah sidoo kale waxa uu kuu gudbiyaa adeega dhakhtarka takhasuska haddii ay lama huraan tahay ama waxa uu kugu wargeliyaa wakaaladaha kale ee bixiya caawimada oo aan u baahnayn gudbin --- sida xarunta gaboodka dhibta, xafiisyada daryeelka qoyska iwm. Dhakhtarkaagu waxa uu ka masuulyahay isku duba ridka, baadhitaanka iyo la socodkaaga marka aad hesho caawimada ka timid dhakhtarka adeega takhasuska caafiimaad leh iwm.
Mashruuca dhakhtarka guud waxa uu qayb ka yahay adeega caafimaadka dad waynaha, oo waxaad bixisaa khidmada caadiga ah ee isticmaalaha.
Barta internatka helsenorge.no waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan Dhakhtarada iyo sida loo beddelo dhakhtarka guud (Keliya Af Noorwayjiyaan)